Hoy Andriamanitra Avo indrindra : "Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny" (Isa.45:12)
Fa samy efa nanota ny rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesoa (Rom.3:23-24), fa fahafatesana no tambin'ny ota ary Fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesoa Tompotsika (Rom.6:23).
Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra (Jao.3:3). Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay (Jao.3:16). Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena (Asa.4:12). Ny ràn'i Jesoa zanany no nanadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra (IJao.1:7b). Izy no avotra noho ny fahotantsika (IJao.2:2a). Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo (IIKor.5:17).
Ary hoy Jesoa: Izaho no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa homena ny fahazavan'aina (Jao.8:12). Koa raha ny zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo (Jao.8:36). Hoy i Jesoa: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino Ahy na dia maty aza, dia ho velona indray.
Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? (Jao.11:25-26). Minoa an'i Jesoa Tompo dia hovonjena ianao. (Asa.16:31). Dia eny izao anio izao, raiso ny fanomezana atolotr'Andriamanitra ho anao: MINO AHO fa JESOA KRISTY no zanak'Andriamanitra (Asa.8:37).
Crée le jeudi 29 mars 2018 à 06:54:26